Mofon’aina – ALAKAMISY 20 APRILY 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALAKAMISY 20 APRILY 2017
23 Ary nony tao Jerosalema Jesosy tamin’ ny Paska, dia tamin’ ny andro firavoravoana, maro no nino ny anarany, raha nahita ny famantarana izay nataony.24 Fa Jesoa tsy natoky azy, satria Izy nahalala ny olona rehetra;25 ary tsy nitady olona hanambara olona Izy; fa ny tenany nahalala izay tao am-pon’ ny olona.
JAONA 2 :23-25
JESOA TOMPON’NY HERY SY NY FAHALALANA REHETRA
1-Jesoa mahery tamin’ny fahagagana
Maro no nanaraka sy nino an’i Jesoa noho ireo famantarana sy fahagagana nataony. Avy tao Kana i Jesoa no nanao famantarana amin’ny maha- Andriamanitra sy Mesia Azy. Mahalala ny ao am-pon’ny olona tsirairay sy ny olona rehetra i Jesoa . Fantany ny finoan’ny olona Azy sy ny fihatsarambelatsihiny. Asehon’i Jesoa fa mbola ao amin’ny maha-olona Azy ireo manaraka Azy ka tsy azony itokiana. Finoana miorina amin’ny famantarana n ananany ka tsy ho afaka hijoro ho vavolombelon’i Kristy izy. Raha mbola tsy nandray ny Fanahy masina ny mpanaraka an’i Jesoa dia mety hiovaova ny finoany. Izany no antony tsy ilan’i Jesoa ny fanamabaran’ny olona Azy eto (and 25).
2-Jesoa manambara ny tenany
Fotoana mampivory ny vahoaka Jiosy any Jerosalema ny Paska. Ity no Paska Jiosy farany atrehany ary anlorany ny ainy ho famonjena izo tontolo izao. Anisan’ny famantarana nataony ny fandravana ny mpivarotra sy ny mpanakalo vola tao amin’ny Tempoly. Izy ihany no manambara sy mampahafantatra ny tenany. Mahery amin’ny asany ny Tompo sady manana ny hery sy ny fahefana hanambara ny tenany. Izy no fahatanterahan’ny zanakondrin’ny Paska Jiosy. Tsy misy heviny ny fivoriana sy ny fiangonana tao Jerosalema raha tsy tonga i Jesoa, Zanakondry tsy misy kilema.
Inona no maha-zava-dehibe ny fiantsoan’i Jesoa ny kristiana hijoro ho vavolombelony ?
Mofon'aina - ALAROBIA 19…